The Honor V30 5G ga-abata na Kirin 990 processor | Gam akporosis
Honor V30 5G ga-abịa na Kirin 990, dịka onye isi ụlọ ọrụ ahụ kwuru
N'ajụjụ ọnụ mgbasa ozi mgbe Wuhan Glory Conference, Onye isi oche nsọpụrụ Zhao Ming gosipụtara na a ga-ebupụta Honor V30 5G na njedebe nke afọ. Ọ bụ ezie na ọ naghị ekwu na Kirin 990 Ọ ga-abụ ihe nhazi ahụ nke a ga-etinye na ekwentị a, Zhao Ming na-egosi na a ga-ebuputa chipset n'otu ụbọchị ahụ na mkpanaka ahụ ga-abata.
Na ngbanwe, Ming kwetara na na asọpụrụ V30 ga-eji Kirin 990 processor, nke ekwuru na ya ga-enye nkwado maka netwọkụ 5G, gịnị kpatara ya Huawei ga-ebido onye nhazi ya ihe omuma a na IFA na Berlin, Germany, na China n'ehihie echi, dị ka atụmanya ndị bilitere na izu ndị na-adịbeghị anya.
Dabere na akụkọ ndị gara aga, Kirin 990 ga - abụ ihe mbụ 5G SoC mgbawa nke ụwa dabere na usoro 7nm EUV FinFET Plus. Nnukwu uru ya karịa usoro nke 7nm gara aga bụ ntinye mbụ nke EU lithography usoro iji nwekwuo mmụba transistor, si otú a na-emezi arụmọrụ mgbawa kwa mpaghara na ibelata ike oriri.
Banyere nhazi nke Artificial Intelligence aga-eme na iwu, na Kirin 810 Amalitere afọ a ejirila DaVinci NPU (Neural Processing Unit) rụọ ụlọ. Kirin 990, maka akụkụ ya, ga-eji NPV DaVinci dị ike karị, ya mere, anyị na-atụ anya mmụba dị ịrịba ama na ngalaba a, yana karịa ihe ọhụrụ dị mfe, anyị na-atụ anya nnukwu akụkọ na ya, nke anyị ka ga-amata.
Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na ndị Kirin 990 kwesịrị ịnwe ihe karịrị otu mgbawa n'oge a. Otu n'ime ha ga - ejikọ aka na 5G baseband. Ọ ga - abụ otu n’ime ndị nhazi izizi nwere modem 5G etinyere n’ime bọọdụ ya. Honor V30 kwesịrị ịmalite tupu njedebe nke afọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Honor V30 5G ga-abịa na Kirin 990, dịka onye isi ụlọ ọrụ ahụ kwuru
Huawei P30 Pro na agba ọhụrụ abụọ ga-abịa na gam akporo 10
TCL PLEX: Smartphone mbụ nke akara aha ya